FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SCOTCH COLLIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Scotch Collie
Collie Old Farm
Ny Scotch Collie dia notezaina bebe kokoa noho ny fahaizany miasa noho ny bika aman'endriny.
Ny Scotch Collies dia tanjona marobe. Misy tsipika iray izay zahana mankany amin'ny karazana 'Squirrel Dog', na dia mbola manana ny fijery sy ny toetran'ny Scotch Collie aza izy io. Ny ankamaroan'ny Scotch Collies dia azo ampiasaina ho alika mihaza kanefa ny ifantohany voalohany dia ny alika mpiompy, ary ankehitriny dia tazomin'ny sasany ho biby fiompy ao an-trano. Izy ireo dia tsara miaraka amin'ny ankizy. Ny Scotch Collies amin'ny ankapobeny dia mifankahazo amin'ny alika hafa ary matetika dia tsara amin'ny biby tsy alika. Miankina amin'ny alika tsirairay sy ny olona manodidina azy, izy ireo dia sariaka amin'ny voatokana sy / na ny fiarahana amin'ny olon-tsy fantatra. Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miara-miaina amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana voafaritra mazava ny tsipika . Ianao sy ny olon-kafa rehetra dia tsy maintsy avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika mba hanana fifandraisana olombelona / alika mahomby.
Haavony: Lehilahy 21 - 24 santimetatra (53 - 61 cm) Vavy 19 - 22 santimetatra (48 - 56 cm)
Milanja: Lehilahy 45 - 70 kilao (21 - 32 kg) Vehivavy 40 - 60 kilao (18 - 27 kg)
Ny Collie dia karazany salama tokoa izay mijaly amin'ny olana ara-pahasalamana kely dia kely. HD dia tsy ahiahy miharihary.
Ny Scotch Collies dia niaina tamim-pahombiazana tamina trano, na dia mila fanatanjahan-tena isan'andro aza izy ireo. Tsy ilaina ny mamono ny Scotch Collie satria tsy dia manimba izy io ary mankafy ny fivezivezena malalaka amin'ny trano / tokontany. Ny Kenneling dia tsy soso-kevitra ihany koa, raha tsy manana hazakazaka lehibe ianao. Ny Scotch Collie dia mahatalanjona any amin'ny toeram-piompiana ary mankafy ny toerana hivezivezena.
Mila fanatanjahan-tena betsaka ny Scotch Collie, ao anatin'izany ny isan'andro MANDEHANA na jogging. Izy ireo dia tsy dia mavitrika toy ny Border Collies, fa tsy mandry ovy ary TSY ho tsara amin'ny fidirana an-tokotany fotsiny. Hahafinaritra azy ireo koa ny lalao Frisbee ao amin'ny valan-javaboary, sns. Raha toa ka mandeha an-tongotra na mandehandeha isan'andro izy ireo, dia tsy ho be fihetsika ary ho afa-po amin'ny fiambenana ny trano mandritra ny fotoana tsy misy anao.
Miankina amin'ny alika sy ny sisiny, fa 12-16 taona no antonony.
Ny palitao dia tokony kosehina isaky ny roa herinandro. Raha manana matotra lehibe ny palitao, dia mety mila tapahina ny tsihy, mifanohitra amin'ny famonoana azy, mba hialana amin'ny fanaintainan'ny alika. Mandrosoa na shampooina maina raha ilaina.
'Random dia mpamonjy an'i Scotch Farm Collie taloha. 10 taona izy ary 70 pounds amin'ity sary ity. Miresaka sy manao sonia izy mba hampisehoana amiko ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra. Mahagaga izy !! '
Ataovy tsy ampoizina ilay alika mpamonjy Scotch Farm Collie taloha amin'ny 7 taona milanja 70 kilao
Random ny alika mpamonjy Scotch Farm Collie taloha tamin'ny faha-7 taonany nampihatra ny fahaizany miompy.
Brenda, vehivavy Scotch Collie iray taona avy any Pasifika NW, izay antsoina matetika hoe 'Farm Collie' ny Scotch Collie
Cookie, Scotch Collie olon-dehibe— 'Manan-tsaina izy, mijery am-pitiavana ary tena mpanao fanatanjahan-tena.' Sary natolotry ny DreamDancer Collies
Cookie, Scotch Collie olon-dehibe, sary natolotry ny DreamDancer Collies
Mokie, alika kely Scotch Collie lahy, sary natolotry ny DreamDancer Collies
Rariny amin'ny maha-alika kely azy - miaina amin'ny toeram-piompiana izy, manao izay tian'ny Farm Collie tsara tarehy atao. Sary natolotry ny DreamDancer Collies
Tyson, lehilahy Scotch Collie maha alika kely, sary nahazoana lalana avy tamin'ny DreamDancer Collies
Hijery ohatra hafa momba ny Scotch Collie
Scotch Collie Sary 1
Scotch Collie Sary 2
Dogs Scotch Collie: sary an-tsokosoko voaangona
inona no bullmastiff ny alika mitovy
sarin'ilay tapakila feno rà
spaniel akoho sy fifangaroana husky